Warbixin: Xabsiyada Maamulka 'Somaliland' oo Noqday Kawaan Lagu Laayo Maxaabiista Dhibanayaasha Ah.
Monday June 19, 2017 - 12:26:48 in Wararka by Super Admin
Xaalad Bani'aadanimo oo aad uliidata ayaa lagasoo sheegayaa xabsiyada uu gacanta ku haayo maamulka isku magacaabay Somaliland ee kajira gobollada dhaca waqooyi galbeed dalka Soomaaliya.
Sawir hore xabsiga dhexe ee Hargeysa
Xabsiyada ‘Somaliland’ ayaa isku bedelay Kawaan dadka lagu dilo waxaana lasoo calaamadeeyay xaalado dhimasho ah oo xabsiyada kajirta balse ay qariyaan saraakiisha ammaanka maamulka caasimadda ka dhigtay magaalada Haregysa.
Caddeymo ay bixiyaan dad lagasoo daayay xabsiyada ‘Somaliland’ ayaa muujinaya heerka ay gaarsiisantahay dhibaatada heysata maxaabiista, ciidamada booliska ayaa si xun ujirdila maxaabiista waxaana marmarka qaar dhacda in maxaabiistu u dhintaan jugta kasoo gaartay Jirdilka.
Cabdi Maalik Muuse Coldoon oo ah saxafi in mudda ah ku xirnaa xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa ka sheekeeyay waxyar oo kamid ah gabood fallada iyo tacadiyada kajira xabsiyada deegaanada Somaliland wuxuuna carabaabay in dad aan la xukumin ay isaga jiraan xabsiyada islamarkaana la tacdiibiyo dhibanayaasha.
Sheekh C/raxmaan Aadan Warsame oo isna lagasii daayay xabsiga Hargeysa ayaa meel fagaara ah ka sheegay in Xabsiyada ay ku xiranyihiin dad xukunkoodu dhammaaday toban sano ka hor illaa iyo shan sano ay xiranyihiin iyadoo aanay jirin wax dambi ah oo loo heysto.
C/raxmaan Aadan Warsame ayaa ugu baaqay dadka ku nool deegaanada ‘Somaliland’ in arrinkan ay ilgaar ah ku eegaan ayna ugurmadaan dadka ku dhibaataysan xabsiyada.
Tobaneeyo Maxbuus ayaa cudurka shubanka ugu dhintay xabsi kuyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida saraakiisha caafimaadka ay sheegeen, xabsiga ugu xun ee maamulka Axmed Siilaanyo dadka ku tacdiibiyo ayaa ah xabsiga deegaanka Mandheera oo ciidamada ilaalada ka haya ay mushaar siiyaan dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Itoobiya.
Halkan ka dhageyso Warbixin ay diyaarisay Idaacadda Alfurqaan MP3